News - ဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအရည်အချင်း
ဘာဖြစ်သလဲ Wအိုမင်းခြင်း Pမင်္ဂလာပါ Qualification
ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရည်အချင်း (WPQ ဟုရည်ညွှန်းဂဟေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရည်အချင်း) သည်စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်အဆိုပြုထားဂဟေဆော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏မှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုဘို့ရလဒ်အကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
2. ဂဟေယူနစ်အားဖြင့်ရေးဆွဲဂဟေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက် (WPS သို့မဟုတ် pWPS) မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
၂ ။ Sမသိမှု
ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဂဟေဆော်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောဂဟေဆက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားသောဂဟေလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်ချက်များမှန်ကန်မှုနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းများအားဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလမ်းညွှန်စာအုပ်အရဂဟေဆော်သောသံကြိုးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
၃ ။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ်
၁။ ၎င်းသည်ဘွိုင်လာများ၊ ဖိအားပေးရေယာဉ်များ၊ ဖိအားပေးပိုက်လိုင်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောများ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့်ဝန်ဆောင်နိုင်သောသံမဏိကိုယ်ထည်များစသည့်သံမဏိပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက်သင့်တော်သည်
၂။ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း arc ဂဟေဆော်ခြင်း၊ argon tungsten arc welding၊ ဓာတ်ငွေ့သတ္တု arc arc welding၊ submerg arc arc welding, plasma arc welding နှင့် electroslag welding စသည့်ဂဟေဆော်နည်းများအတွက်သင့်တော်ပါသည်။
IV ။ လုပ်ငန်းစဉ်
၆။ ဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ (လုပ်ငန်းစဉ်ကဒ်ပြားနှင့်လုပ်ငန်းကဒ်များအတွက်အလုပ်လမ်းညွှန်)
၁။ ပဏာမဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (pWPS)
၆ ။ အကဲဖြတ်ခြင်း sကျောက်တံတား
စံ တရုတ် ဖြစ်စဉ်ကိုအကဲဖြတ်ဘို့စံချိန်စံညွှန်းများ
၁ NB / T47014-2011“ ဖိအားသုံးကိရိယာများအတွက်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ”
2 GB50236－၉၈“ ကွင်းဆင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ စက်မှုပိုက်လိုင်းဂဟေဆော်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဖိအားပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆန်းစစ်ခြင်း”
၃“ Steam ဘွိုင်လာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနည်းပညာကြီးကြပ်ရေးစည်းမျဉ်းများ (၁၉၉၆)” မှတ်ချက် - ဤဓာတ်ခွဲခန်းကိုဓာတ်လှေကားလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ငန်းစဉ်အကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
4 SY ∕ T0452-2002“ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဂဟေဆော်လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောနည်းလမ်း” (မှတ်ချက် - ရေနံနှင့်ဓာတုလုပ်ငန်းစဉ်အရည်အချင်းအတွက်)
5 GB50661-2001“ သံမဏိကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်” (မှတ်ချက် - အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတံတားများ၏လုပ်ငန်းစဉ်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်)
6 SY ∕ T4103－၂၀၀၆“ သံမဏိပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း”
7. JB4708-2000 "သံမဏိဖိအားသင်္ဘောများအတွက်ဂဟေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အရည်အချင်းကို" ။
EN 288 သို့မဟုတ် ISO 15607-ISO 15614 စီးရီးစံနှုန်းများ
ISO15614-1 သံမဏိကို arc welding နှင့် gas welding / နီကယ်နှင့်နီကယ်သတ္တုစပ်များ၏ arc welding
ISO15614-2 လူမီနီယမ်နှင့်လူမီနီယံသတ္တုစပ်၏ arc ဂဟေဆော်
ISO15614-3 သွန်းသံကို arc
ISO15614-5 တိုက်တေနီယမ်နှင့်တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များကို arc welding / zirconium နှင့် zirconium သတ္တုစပ်များကို arc welding ပြုလုပ်သည်။
ISO15614-6 ကြေးနီနှင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်များကို arc ဂဟေဆော်ခြင်း
ISO15614-7 ဂဟေ surfacing
D1.1 ∕ D1.1M: ၂၀၀၅ သံမဏိကိုယ်ထည်ဂဟေဆော်ခြင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
D1.2 ∕ D1.2M: လူမီနီယံအဆောက်အ ဦ များအတွက် 2003 ဂဟေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ပါးလွှာသောသံမဏိကိုယ်ထည်များအတွက် D1.3-98 ဂဟေဆော်ခြင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
D1.5 ∕ D1.5M: 2002 တံတားဂဟေ
D1.6: 1999 သံမဏိဂဟေ
D14.3 ∕ D14.3M: 2005 ချီစက်ဂဟေဆော်ခြင်းစည်းမျဉ်းများ
post အချိန်: Aprပြီ -14-2021